Ihe nkiri 6 ị nwere ike ịhụ tupu njedebe nke June | Bezzia
Ihe nkiri 6 ị nwere ike ịhụ tupu njedebe nke June
Maria onyekwere | 18/06/2022 22:00 | Akụkọ
Iji luso oke okpomọkụ nke anyị na-enwe ụbọchị ndị a ọgụ, anyị enweghị ike iche atụmatụ ka mma karịa gbaba n'ebe a na-eme ihe nkiri. Ihe nkiri dị mma, ntụ oyi… Ọ dịghị ihe ọzọ achọrọ! E wepụtara ihe nkiri isii ndị a na ngwụcha izu a ma ọ bụ na-esote. Rịba ama ha!
1 Ibu na-enweghị ike ịnagide nke nnukwu talent
2 Anyị agaghị eji égbè gbuo ibe anyị
3 ị ga-abịa hụ ya
4 Camila na-apụ n'abalị a
6 Ekwentị ojii
Ibu na-enweghị ike ịnagide nke nnukwu talent
Duziri ya Tom Gormican
Ndị na-eme ihe nkiri Nicolas Cage, Pedro Pascal na Alessandra Mastronardi
Akụkọ soro omee Nicolas Cage, onye na-achọsi ike itinye aka na ihe nkiri Quentin Tarantino. N'elu nke ahụ, ya na nwa ya nwanyị dị afọ iri na ụma na-enwe mmekọrịta siri ike ma nwee nnukwu ụgwọ. Ụgwọ ndị a na-amanye ya ka ọ pụta na ememe ụbọchị ọmụmụ nke onye ijeri Mexico bụ onye na-akwado ọrụ onye na-eme ihe nkiri na fim ya gara aga, na-ezube igosi ya edemede ọ na-arụ ọrụ.
Ka ya na nwoke ahụ na-akpakọrịta, CIA na-agwa ya na billionaire bụ n'ezie a ụlọ ọgwụ eze onye tọọrọ ada nke onye na-azọ ọkwa onyeisiala Mexico. Mgbe nke a gasịrị, gọọmentị United States na-ewe ya n'ọrụ iji nweta ozi.
Anyị agaghị eji égbè gbuo ibe anyị
Duziri ya Mary Ripoll
Ndị na-eme ihe nkiri Ingrid Garcia Jonsson, Elena Martin, Joe Manjon
Mgbe obodo ahụ na-akwado ime ememe isi ya, Virgen del Mar, Blanca na-agba mbọ hụ na paella mbụ ọ na-akwadebe na ndụ ya zuru oke. O jisiri ike kpọkọta ndị enyi ya nke ndụ mgbe ọtụtụ afọ na-ahụghị ibe ha. Ụfọdụ gbalịrị ime njem n'ime obodo, ndị ọzọ ná mba ọzọ na otu nọrọ n'ime obodo. Ha niile dị afọ iri atọ na-eche na ntorobịa ha na-apụ n'anya.
Ndụ ha na-aga n'etiti enweghị nchebe ọrụ, enweghị mmasị na mmalite na-aga n'ihu. Paella na-adịgide ruo mgbede, n'etiti mkpughe nke nzuzo, nkọcha na nghọtahie. Na, n'ikpeazụ, verbena rutere: ihe àmà na-egosi na ụwa na-aga n'ihu na-atụgharị mgbe ndụ ndị na-eme ihe nkiri yiri ka ọ na-adaba na karịa mgbe ọ bụla, ha ga-achọ ibe ha ka ha gaa n'ihu.
ị ga-abịa hụ ya
Duziri ya Jonah Trueba
Kpara Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar
Abụọ na ndị enyi ha zutere ọzọ. Ha na-ege egwu, na-ekwu okwu, na-agụ, na-eri nri, na-eje ije, na-egwu ping-pong... O nwere ike ọ gaghị adị ka ihe nkiri, ya mere "ị ga-abịa ịhụ ya".
Camila na-apụ n'abalị a
Duziri ya Ines Maria Barrionuevo
Ndị na-egosi Nina Dziembrowski, Maite Valero, Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Federico Sack na Guillermo Pfening
Camila anya manyere ịkwaga Buenos Aires mgbe nne nne ya dara ọrịa siri ike. Ọ hapụrụ ndị enyi ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọha na eze na-emesapụ aka maka ụlọ ọrụ nzuzo omenala. A na-anwale iwe ọkụ Camila mana akabeghị aka.
Duziri ya Ọ bụ Luhrmann
Na-eme Austin Butler, Tom Hanks na Olivia DeJonge
ihe nkiri biographical gburugburu ndụ na egwu Elvis Presley, na-elekwasị anya na mmekọrịta dị mgbagwoju anya ya na onye ọrụ ya dị omimi: Colonel Tom Parker. Ihe nkiri a na-abanye n'ime mgbagwoju anya dị n'etiti Presley na Parker n'ime ihe karịrị afọ 20, site na ịrị elu Presley ruo na ama ama ruo na kpakpando ya na-enwetụbeghị ụdị ya. Ihe a niile n'azụ ákwà mgbochi nke mgbanwe omenala na ntozu ọha na United States. N'etiti njem ahụ bụ otu n'ime ndị kacha mkpa na ndị nwere mmetụta na ndụ Elvis, Priscilla Presley.
Duziri ya Scott derrickson
Ndị na-eme ihe nkiri bụ Mason Thames, Madeleine McGraw na Ethan Hawke
onye nwuru anwu tọọrọ Finney Shaw, nwa nwoke dị afọ 13 ihere ma nwee ọgụgụ isi, ma kpọchie ya n'ime ụlọ okpuru ulo na-adịghị ada ụda ebe mkpu ya na-abaghị uru. Mgbe ekwentị gbajiri agbaji na nke na-anọghị n'ịntanetị malitere ịpị, Finney chọpụtara na site na ya ọ nwere ike ịnụ olu ndị mbụ metụtara, bụ ndị kpebisiri ike igbochi Finney ka ọ kwụsịchaa dị ka ha.
Ị chọrọ ịhụ nke ọ bụla n'ime ihe nkiri ndị a? Ụfọdụ n'ime ha abanyelarị na ụlọ ihe nkiri. Lelee bọọdụ mgbasa ozi obodo gị ka ịmata ihe nkiri ị nwere ike ịhụ ugbu a. Ma ọ bụrụ na ọ na-amasị gị ịnụ ụtọ usoro n'ụlọ karịa, lelee nke kachasị ọhụrụ netflix wepụtara ma ọ bụ HBO.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ihe nkiri 6 ị nwere ike ịhụ tupu njedebe nke June
Microcement: ihe a na-achọsi ike na ụwa nke mgbanwe
Mugwort: nnukwu uru ahụike ya